Nandefa Fanomezana Taombaovao Ho An’i Kambodza ny Google · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2018 5:27 GMT
Gaga ireo mpisera Google any Kambodza raha nahita fa rehefa mitsidika ny www.google.com izy ireo, dia mitondra azy ireo any amin'ny anaran-tsehatra www.google.com.kh ny tranonkala. Tany am-piandohan'ny volana Desambra, nanangana ny anaran-tsehatra Google Cambodia ny orinasam-pikarohana antserasera lehibe indrindra izay manome fahafahana ho an'ny mpiserasera mba hitady vaovao amin'ny teny Khmer, fiteny ofisialy ao Kambodza.
“Androany, gaga aho raha nahita ny Google miaraka amin'ny anaran-tsehatra vaovao Cambodia (ny anaran-tsehatra taloha tsy ofisialy tao Cambodia dia http://www.google.com/intl/km/),” hoy i Sopheak, bilaogera Kambodziana mamoaka lahatsoratra bilaogy amin'ny tenin-drazany.
Maneho valinteny afa-po amin'ny Google mankany amin'ny tsena madinika ny fanehoan-kevitra maromaro avy any Kambodza, indrindra avy amin'ireo mpankafy teknolojia. “Nahatsikaritra fotsiny fa nanaiky ny Khmer ihany ny Google nony farany. Ohatra, fikarohana ny fiteny ភាសាខ្មែរ (” Khmer “amin'ny fiteny Khmer) … mbola tsy betsaka ny vali-pikarohana, saingy mahafinaritra ny mahita zavatra mandroso amin'ny teny Khmer,” hoy ny mpila ravinahitra iray miasa amin'ny famoronana tranonkala tao amin'ny bilaoginy.
Pikantsarin'ny endrika amin'ny teny Khmer tao amin'ny pejy fandraisana Google
Notaterin'ny gazety amin'ny fiteny maro malaza, Cambodia Daily ao Kambodza ny vaovaon'ny Google namoaka ny fiteny Khmer. Azo jerena ato ny dikan-teny fenon'ny lahatsoratra.
Araka ny voalaza tao amin'ny gazety, nihevitra ireo solontenan'ny Intel Corporation fa afaka miditra aterineto ny 12 isanjaton'ny Kambodziana.
Mandamina ny fampahalalam-baovao maneran-tany no asan'ny Google, milina fikarohana antserasera. Ity hevitra goavana ambadiky ny fahombiazan'i Larry Page sy Sergey Brin, mpanorina ny orinasa ity no mahatonga ny Google ho safidy voalohany ho an'ireo mpiserasera aterineto.
Nanamarika i Vutha ao amin'ny “We always go forward over the world (handroso foana manerana izao tontolo izao izahay)” fa: “Vao haingana, nanangana ny anaran-tsehatra Google Cambodia (www.google.com.kh) ny Google Company. Noho izany, azontsika atao ny manoratra Khmer Unicode rehefa hanao fikarohana. Amin'ny vokatra, tsy ho ela, dia hampiasa endri-tsoratra Khmer Unicode isika Kambodziana fa tsy endri-tsoratra Khmer hafa tahaka ny ABC, Limon sy ny sisa intsony. ” Maro ny fitantarana feno hafa azo jerena, izay nalefan'ilay bilaogera Cambodia tao amin'ny ‘webbed feet’.
Efa an-dalam-pandrosoana nanomboka vao haingana izy io, saingy raha mijery avy any Kambodza ianao, vao iray andro izay no nivoahan'ny rohy ao amin'ny pejy voalohan'ny Google Khmer. Tsy nahita filazana an-gazety ofisialy avy amin'ny Google aho ary heveriko fa mbola andrana beta izany. Volana maromaro lasa izay, nandeha ny fikarohana Khmer, saingy tsy dia maro ny fanondroana.
Na izany aza, raha tsy misy ny fitovian'ny endri-tsoratra eo amin'ny mpiserasera, tsy afaka mamaky mailaka, antontan-taratasy, na tranonkala izy ireo raha tsy misy ny endri-tsoratra mifanaraka tsara napetraka amin'ny solosainan'izy ireo manokana. Asa goavana ny famoaham-baovao ao amin'ny tranonkala sy bilaogy amin'ny teny Khmer.